Khudradda | October 2019
Salaad ah oo ah hadhuudh iyo ulaha cusub ma aha kaliya dhadhan fiican, laakiin sidoo kale saxan aad u caafimaad leh. In kasta oo ay jiraan tiro badan oo cuntooyin ah, waxyaabaha ugu muhiimsan ayaa weli isma beddelin. Waxaad karisaa salad gallo oo kaliya ma aha miiska xaflada, laakiin inaad la yaabto oo aad u jilciso kuwa aad jeceshahay maalin kasta. Si xajmigani uusan u dhibin, waxaad u baahan tahay inaad ku darto nooc ka mid ah "zest".
Cunto fudud oo asaasi ah oo loogu talagalay karinta cuntada hadhuudh kariyaal ah
Raaxo jecel ee dadka waaweyn iyo carruurta - hadhuudh la kariyey - waa mid caan ah sanad walba. Maanta ee maqaalkani waxaan ka wada hadli doonaa sida aad u karin karto hadhuudhka mashiinka qadada ah ee lammaanaha si dhamaan xubnaha qoyskaaga ay ku qanacsan yihiin. Noocyada khudradda leh Qodobbada waxtarka leh: Halbeegga hadhuudhku wuxuu ka kooban yahay fitamiino badan: E, D, PP, koox B, ascorbic acid.
Sida loo kariyo hadhuudhka jiilka iyo inta aad u baahan tahay inaad karsato: cuntada fudud ee tallaabo tallaabo ah oo leh sawirro
Ganacsiga Cuntada ma jiro wax ka fiican saxada fudud laakiin dhadhan fiican leh oo aan u baahnayn in la qaato waqti badan, iyo sheyga loo isticmaali karo qaab gebi ahaanba duwan oo ka dhigi kara farxad badan oo kala duwan oo ah wax qiimo leh. Corn ayaa ka jawaabeysa labada dhibcood, laakiin in this article waxaan ku siin doonaa fiiro oo kaliya kaliya diyaarinta cobs naftooda.
Dhammaan wixii ku saabsan sida loo kariyo hadhuudhka caanaha leh subagga waa dhadhan fiican oo dhakhso ah: talooyin karinta
Mucaradka caanuhu waa nooc saxa ah oo carruur badan iyo dad waaweyn. Khudradda cagaaran nafsaddeeda waa mid casri ah oo macaan, iyo haddii aad ku dareyso caanaha, markaa dhadhanka oo dhan ayaa kordhi doona. Waxaa jira cuntooyin aad u tiro badan oo la isku qurxiyo caanaha, si qof kastaa u doorto ikhtiyaarka ugu fiican ee naftiisa.
Xilliga xagaaga waa waqti cajiib ah. Nasasho! Badda! Si fiican! Iyo dabcan, saxamada ugu wanaagsan iyo cabitaanada! Horeba July, waxaanu tagi karnaa dukaamo ama dukaamo kasta oo iibsanaya dhegaha miraha dhalinyarada ah. Dhowr daqiiqadood iyo ... voila! Guryuhu waxay ka buuxsamaan caraf udgoon iyo galley caafimaad leh. Hooyooyinka da'da yar, dabcan, waydii su'aalahooda: intee in leeg iyo sida loo kariyo hadhuudh?
Tan iyo wakhtiyadii hore, mid ka mid ah suxuunta ugu wanaagsan ee dadka waaweyn iyo carruurta labadaba waa la kariyey hadhuudh. Si kastaba ha ahaatee, si ay dhegaha u soo baxaan macaan iyo casiir leh, waa inaad u hoggaansata xeerarka diyaarinta. Intaa waxa dheer, waxaa sidoo kale muhiim ah in la doorto nooca saxda ah ee hadhuudhka, taas oo ah mid ku habboon cunto karinta.
Sidee iyo intee in le'eg cunto karsan hadhuudh cusub? Cunto kariska
Miro iyo dhadhan qoyan oo la kariyey waa daaweyn loo jecel yahay carruurta iyo dadka waaweyn. Si loo ilaaliyo qiimaha nafaqada iyo dhadhanka, waxaa muhiim ah in si wanaagsan loo diyaariyo dhegaha miraha cusub. Sidee loo doortaa iyo inta ay qaadaneyso qaadashada hadhuudh cusub oo ku taal rugta? Maxaa laga samayn karaa hadhuudh cusub, talooyin la xaqiijiyay iyo khiyaamo.
Sidee loo doortaa hadhuudhka oo si fiican u karsiiyaa haddii aad iibsatay adadag?
Hadab la kariyey waa mid ka mid ah suxuunta ugu caansan xagaaga xagaaga, maxaa yeelay waxaa jecel dadka waaweyn iyo carruurta. Haseyeeshee muddada dheer ee badeecadan la keydsho, waxay sii xumaataa waxay noqotaa, tani waxay saamayn ku yeelanaysaa dhadhanka. Laakiin xitaa hadhuudh adag ayaa la samayn karaa aad u dhadhan fiican leh haddii si habboon loo kariyo.
Sidee loo Marinate Corn: Nafaqada Guriga Cunnada
Corn in foomka qasacadaysan waa badeecad guud, maxaa yeelay waxaa la isku dari karaa khudradda cusub ee la kariyey, hilibka, badda, kalluunka iyo xitaa miro. Waxay ufiican tahay qayb ka mid ah salaadaha, saxan dhinaca lafaha ah ama suxuunta qurxinta. Hooyo kasta waa in ay ogaato shuruucda iyo waxyaabaha gaarka ah ee ilaalinta hadhuudhka, haddii kale waa wax aan macquul ahayn in la helo diyaar garo dhadhan leh jiilaalka.
All oo ku saabsan sida loo keydiyo dabacasaha xilliga qaboobaha
Karootada - waa dhadhan, casiir leh, badeecad caafimaad leh. Haddii aysan jirin, waa suurtagal in la qiyaaso saxan khudradeed. Kaliya waa ku fiican tahay hal kiis - marka ay tahay mid cusub oo adag. Laakiin dalagga aasaasiga ah ayaa si dhaqso ah u socda. Inta lagu jiro kaydinta muddada dheer, waa in lagu dhajiyaa maskaxda in maqaarka dabacasaha uu yahay mid khafiif ah, si sahlan loo waxyeeleeyo, iyo cudurradan cirridka ah iyo cirridka dhammaan noocyada.
Tilmaamo fudud oo loogu talagalay goosashada munaasibka ah ama wax kasta oo ku saabsan champignons ee sii koraya guriga
Champignons waa boqoshaada aan qabin ee lagu kori karo dalka, iyo xitaa guriga. Waxa ugu muhiimsan waa in qolka lagu hayo iyo qoyaanka hawada si joogto ah u sareeya. Diyaargaroowga Substrate Intii lagu guda jirey geedi-socodka sii kordhaya ee guriga, marxaladani waa waqtiga ugu badan ee qaadata. Waa muhiim inaad sameyso wax kasta si adag si waafaqsan tilmaamaha si ay ugu dambeyntii u helaan goosashada fiican.
Dhammaan siraha ee bocorka: beerashada iyo daryeelka ee gobollada kala duwan
Bocalka waxaa ku jira xaddi badan oo fiitamiin iyo nafaqo. Intaa waxaa dheer, wax kasta oo bocorka ah waa mid qiimo leh - laga bilaabo miraha si saxaro, taas oo ka mid ah waxyaabo kale, waxaa ku jira fitamiin T. Aad ayay u fudud tahay inaad soo saarto khudraddaas oo ku taala dhulalkaaga. Pumpkin ka yar xaalad kasta oo si fiican u koraan iyo siin doonaan goosashada hodan ah.